Madasha xisbiyada mucaaradka ah, oo ku baaqay in shirka Muqdisho laga qayb geliyo. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Madasha xisbiyada mucaaradka ah, oo ku baaqay in shirka Muqdisho laga qayb geliyo.
Madasha xisbiyada mucaaradka ah, oo ku baaqay in shirka Muqdisho laga qayb geliyo.
Madasha ay ku bohoobeen xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliya, ayaa madaxwaynaha DFS iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay in shirka lagu wado in uu ka Furmo magaalada Muqisho uu noqdo mid meesha ka saara dhammaan wixii dib-udhac ku keeni kara doorashooyinka bilaha koobani ka hadhsanyihiin ee Soomaaliya.
War murtiyeed ay wadda jir u soo saareen madasha xisbiyadu aya lagu yidhi .
“ Madashu waxay ugu baaqeysa Madaxweynaha Dowladda Federaalka inuu shirkani noqdo mid ay goobjoog ka yihiin dhammaan Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federeelka si looga gudbo khilaafka hareeyay hannaanka doorashada, loogana gaaro go’aanno kama danbays ah oo loo dhanyahay’’.
Mashada xisyada siyaasadda ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale soo jeediyay shirka ay qayb ka noqdaan dhammaan saamilayda siyaasadda iyo ururrada bulshada rayid ka ah.
” Madashu waxay ku baaqaysaa in la ballaariyo gogosha looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka laguna casumo hogaanka ururada Bulshada rayidlka ah iyo xisbiyada sayaasadeed, si looga feejignaado wax kasta oo keeni kara khilaaf’’, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ay soo saareen asxaabta mucaaradka ahi.
Kenya oo Soomaalida u fududeysay fiisaha dalkeeda
Dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Gobolka Liibaan